गोविन्द केसीको समर्थनमा बाबुराम भट्टराईदेखि रविन्द्र मिश्रसम्म सडकमा, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
गोविन्द केसीको समर्थनमा बाबुराम भट्टराईदेखि रविन्द्र मिश्रसम्म सडकमा, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन !
प्रकाशित मिति २५ पुष २०७४, मंगलवार ०९:३० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । सम्मानीत अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा सोमबार पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रले समेत साथ दिएका छन् ।
डा. केसीका समर्थकहरुले मंगलबार बिहानैदेखि केसीको रिहाइ र सर्वोच्चले गरेको फैसला खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । सर्वोच्चको आदेशबाट सोमबार राति डा. केसीलाई पक्राउ गरिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा डा. भट्टराई र मिश्र लगायतले अग्रपंक्तिमा बसेर केसीको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पेसाकर्मीको सहभाता थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत प्रदर्शनकारीहरुलाई आफ्नो साथ रहेको घोषणा गरेका छन् ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा शशि शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेपछि डा. केसी प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै सोमबार अनसनमा बसेका थिए ।
अनसन बसेलगत्तै सर्वोच्चले उनलाई सोमबार राति पक्राउ गरेर सिंहदरबारस्थित प्रहरी कार्यालयमा राखेको र मंगलबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
केसीलाई मंगलबा बिहान नौ बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएकाे छ ।
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले विश्वमा दोस्रो आमविनाश निम्त्याइरहेको अध्ययनको दाबी
काठमाडौं । शृंखलाबद्ध रुपमा बढ्दो तापक्रमको अवस्थाले जलचर र स्थलचर जीवनका लागि खतरापूर्ण बन्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।…
बेइजिङ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत,…
१ हजार ७०० आयोजना अख्तियारको सूक्ष्म निगरानीमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित देशभरका एक हजार ७०० भन्दा बढी विकास आयोजनालाई…
सुन तस्करी काण्ड : पोद्दार पक्राउसँगै कायस्थ पनिअनुसन्धानमा तानिए
काठमाडौं । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको…
काठमाडौं । सरकारी लगानी डुबाउन खोज्ने पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीलाई सरकारले पुरस्कृत गरेर नमूना प्रदर्शन गरेको छ । ह्यातले…